Xaggee caawimo laga raadsadaa? - Lastensuojelu.info
Reeraha carruurtoodu ka yar yihiin da’da iskuulka
Rugta dhalaanka iyo hooyooyinka waxaa lagula socdaa hadba marxalada uurka, hooyada iyo dhalaanka dhalan doona ladnaanshihiisa iyo weliba koritaanka iyo kobaciisana lugala socdaa ilaa uu ka gaaro todoba jir.
Sidoo kale rugtaas waxaa lagaga caawiyaa reerka waalidnimada iyo ladnaanshaha, sidoo kalena hadba sidii loogu baahdo in waalidka la siiyo wixii tusmo ah ee la xiriira dhanka barbaarinta.
Waddanka Finland waxaa ka jira xannaano maalmeed carruurta lagu hayo, taasina waxay suuragelineysaa inay waalidiinta shaqaystaan ama wax bartaan. Xannaano maalmeedku waxaa lagu qaban karaa xannaanada ama xannaano qoyseedka, tusaale daryeelaha oo guriga ugu yimaada
Waxbarashada hore waxaa loogu talagalay dhammaan carruurta aan da’da iskuulka gaarin. Sida caadiga ah ilmuhu waxbarashada hore wuxuu bilaabaa sannadka uu lix jirsanayo. Marka lagu jiro wakhtiga waxbarashada hore, iyadoo la isticimaalayo ciyaarid iyo wax wada samayn buu ilmuhu bartaa aqoonta iyo xirfadaha uu u baahan doono markuu iskuulka bilaabo. Finland waxbarashada hore waxaa lagu dhigaa xannaanooyinka iyo iskuullada.
Qoysaska leh carruurta da’da iskuulka ah
Carruurta sida rasmiga ah Finland u deggen ee ka weyn da’da 7 jirka waxbarashadu waajib bay ku tahay, waxaana ay waajib waxbarashada qasabka. Waxbarashada qasabka waxay qaadataa ugu badnaan ilaa 17- jir uu buuxiya. Waxbarashada asaasiga ee dugsiga hoose waa fasallada 1aad–6aad, dugsiga dhexena waa fasallada 7aad.–9aad. Waxbarashada aasaasiga Finland waa lacag la’aan. Waxaa waxbarista usii dheer qalabka waxbarashada iyo buugaagta maadooyinkana iyo weliba raashinka iskuulka waa u lacag la’aan waxbarshada aasaasiga ah. Wabarashada aasaasiga kadib ardeydu waxay waxbarashadooda ka sii wadataan dugsiyada sare ama dugsiyada farsamada.
Waxbarashada ardayga u diyaarinaysa waxbarashada aasaasiga ah (Perusopetukseen valmistava opetus)
Waxbarashada ardayga u diyaarinaysa waxbarashada aasaasiga ah waxaa loogu talogalay carruuraha, kuwaasoo aan aqoonta luuqadooda finnishku filneyn iney waxbarashada caadiga. Aqoonta luuqada waxaa qiimeyn ku sameynaya aqoonyahano ma aha waalidka cida qiimeyneysa. Waxbarashada diyaarinta ah marka lagu jiro waxaa si gaar ah xoog loo saaraa oo la bartaa luuqadda finnishka.
Waxqabadka gelinka hore iyo gelinka dambe (Aamu- ja iltapäivätoiminta)
Iskuuleyda waxqabadka gelinka hore iyo gelinka dambe waa naadi waqabad ama howlaha xiliga fasaxa, taasooy carruurta ka qeybqaadan doonaan iskuulka ka hor ama iskuulka kadib. Muhiimada weyn ee loogu talogaley waa ardeyda fasalka kowaad iyo fasalka labaad.
Daryeellidda ardayda (Oppilashuolto)
Daryeellidda ardayda Waxaa lagu hormariyaa ardeyda waxbarashadooda, ladnaanshahooda iyo caafimaadkooda. Taasna waxaa ka qeyb qaata dadka waaweyn ee ka shaqeeya iskuullada. Iskuulka waxaa ardeyda loo sameeyaa daryeelka caafimaadka iskuulka. Waxaa intaa dheer oo ka caawinaya dhigashada iskuulka cilminafsiga iskuulka iyo u qaabilsanaha aqlaaqda iskuulka (koulukuraattori), kuwaasoo wada shaqeyn la yeelanaya waalidka.
Shaqada dhallinyarada (Nuorisotyö)
Muhiimada howshani waxay tahay in la kaalmeeyo dhalinyarada koriimada iyo ladnaanshaha. Shaqada dhallinyarada waxay ahaan kartaa tusaale ahaan naadi, xerooyin, barnaamijyo ama kooxo muusig iyo howlo ciyaar.
Adeegyada kalee qoysaska ee muhiimka
Barbaarinta iyo rugta daryeelka qoysaska
Barbaarinta iyo rugta daryeelka qoysaska waxaa ka heleysaa kaalmo dhanka barbaarinta iyo nolosha qoyska. Talosiin waad ugu imaan kartaa markii, haddii ay jirto kurbo hab-dhaqank carruurta ama reerku heysato wallaac iyo murugo.